२४ फोटोमा हेर्नुहोस् जेलबाट निस्केर सांसदको शपथ लिँदा रेशम चौधरीको शान, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
२४ फोटोमा हेर्नुहोस् जेलबाट निस्केर सांसदको शपथ लिँदा रेशम चौधरीको शान
काठमाडौं । कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित राजपा सांसद रेशम चौधरीले आज सपथ ग्रहण गरेका गरेका छन्। उनलाई आज प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका हुन्। उनले थारु भाषामा सपथ ग्रहण गरेका हुन्। सपथ ग्रहण कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा सत्तारुढ दलका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित राजपाका सबै नेताहरु सहभागी भएका थिए।
सपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि चौधरीलाई पुनः डिल्लीबजार कारागारमा लगिएको छ। चौधरीलाई लिनका लागि उनको श्रीमती र छोरा पनि सिंहदरबार आएका थिए। टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक बालक र एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएपछि फरार रहेका चौधरीले फागुन १४ गते २०७४ मा आत्मसमपर्ण गरेका थिए। चौधरीलाई टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार ठहर गरिएको थियो। उनले अहिले जेल जीवन विताइरहेका छन्। डिसीनेपालकर्मी आर्यन धिमालले खिचेका फोटोमा हेर्नुहोस् यसरी शानसँग आएर शपथ खाइ शानसँग जेल फर्के रेशम चौधरी ।
तस्विर : आर्यन धिमाल